Booliska Spain oo xiray nin ay ku eedeyeen inuu faafiyay COVID19 | Star FM
Home Caalamka Booliska Spain oo xiray nin ay ku eedeyeen inuu faafiyay COVID19
Booliska Spain oo xiray nin ay ku eedeyeen inuu faafiyay COVID19
Ciidamada booliska ee dalka Spain ayaa gacanta ku dhigay eedeysane 40 sano jir ah oo loo haysto inuu si ula kac ah dad u qaadsiiyay cudurka COVID19.
Wararka ayaa intaa ku daraya in ninkan uu dhowr mar isaga oo ku sugan goobtiisa shaqo uu hoos u dhigay maaskarada si uu u qufaco wuxuuna howlwadeenada kale ku wargeliyay in uu u gudbinaya caabuqa corona.
Laamaha ammaanka ayaa sheegaya in ay ka shakisan yihiin in ninka la qabtay uu cudurka qaadsiiyay 22 qof.
Wararka ayaa intaa ku daraya in eedeysanaha uu si joogto ah u tagayay goob jimicsi oo ku taalla gobolka Majorca in kastoo ay qandho haysay sidoo kalena heerkulka jirkiisu ahaa 40 digriis.
Previous article11 Itoobiyaan ah oo loo xiray in ay wadanka si sharci darro ah ku joogaan
Next articleDHAGEYSO:Dadka qabo xanuunada gaarka ah oo lagu boorriyay in ay ka taxadaraan cuntooyinka ay isticmalaan xilliga Ramadaan